American Airlines mihaona amin'ny fangatahana sidina ho an'i Jamaika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » American Airlines mihaona amin'ny fangatahana sidina ho an'i Jamaika
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett (ankavanana) dia miarahaba ny filoha lefitra, Global Sales, American Airlines, Kyle Mabry, ao amin'ny foiben'izy ireo any Dallas, Texas ny alakamisy 23 septambra 2021.
Nilaza ny minisitry ny fizahan-tany Hon. Edmund Bartlett sy tompon'andraikitra ambony amin'ny fizahan-tany Jamaikana nandritra ny fivoriana ny alakamisy teo tao amin'ny foiben'izy ireo any Dallas, Texas, fa amin'ny volana desambra dia hahita sidina 17 tsy an-kijanona isan'andro ny firenena, amin'ny fiakaran'ny fangatahana ny toerana haleha.
American Airlines dia nanamafy fa hampiasa fiaramanidina Boeing 787 amin'ny làlambe maromaro mankany Jamaika manomboka ny volana novambra.
Ny sidina isan'andro eo anelanelan'ny Kingston sy Miami dia mitombo hatramin'ny iray ka hatramin'ny 3 hatramin'ny desambra ary sidina tsy miato 3 isan-kerinandro no ampiana eo anelanelan'i Philadelphia sy Kingston.
Ny fizahan-tany ao Jamaika dia manao fihaonambe amin'ireo mpitarika indostrian'ny dia manerana ny tsenan-tahiry lehibe indrindra any Etazonia, Etazonia sy Kanada.
Nasongadin'izy ireo koa izany Jamaika nitazona an'i Karaiba teo amin'ireo mpanjifa tamin'ny sehatra amerikana Vacations American Airlines Vacations mivelatra ary nanamafy izy ireo fa hampiasa ny fiaramanidina Boeing 787 vaovao sy malalaka, amin'ny làlana mizotra marobe mankany Jamaika manomboka ny volana novambra.
Nanatevin-daharana ny talen'ny fizahan-tany, Donovan White i Bartlett; Strategiste zokiolona ao amin'ny Ministeran'ny fizahantany, Delano Seiveright ary talen'ny talen'ny fizahan-tany ho an'i Amerika, Donnie Dawson. Izy ireo, miaraka amin'ny filohan'ny Birao mpizahatany ao Jamaika (JTB), John Lynch, dia manao fihaonambe maromaro amin'ireo mpitarika indostrian'ny fizahan-tany manerana ny tsenan-tahiry lehibe indrindra any Jamaika, Etazonia sy Kanada. Izany dia atao mba hampitomboana ny fahatongavan'ireo tonga any amin'ny toerana haleha mandritra ny herinandro sy volana ho avy, ary koa, mba hampiroboroboana ny famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny sehatry ny fizahan-tany eo an-toerana.
Ny minisitry ny fizahantany, ny Hon. Edmund Bartlett, (ankavanana faha-3) dia mizara fotoana fohy amin'i Kyle Mabry, filoha lefitra, Global Sales, American Airlines (faha-2 ankavanana); Marvin Alvarez Ochoa, Manager Sales Caribbean, American Airlines (3 ankavia); Donovan White, talen'ny fizahantany, (faha-2 havia); Delano Seiveright, Mpanolotsaina zokiolona sy stratejista, Minisiteran'ny Fizahan-tany (ankavia) ary Donnie Dawson, Tale lefitra misahana ny fizahan-tany any Amerika (JTB). Bartlett dia nitarika fivoriana tamin'ny fitantanana ambony an'ny American Airlines ao amin'ny foiben'izy ireo any Dallas, Texas ny alakamisy 23 septambra 2021.
Tonga ny vaovao fandraisana na eo aza ny fihenan'ny fangatahana dia an-tany noho ny fielezan'ny karazana Delta an'ny COVID-19.
Amin'ny vaovao miarahaba an'ireo mpandeha Kingston, nanamarika ny kaompaniam-pitaterana fa hampitombo ny isany sidina isan'andro eo anelanelan'ny Kingston sy Miami manomboka amin'ny toeran'ny iray ka hatramin'ny telo hatramin'ny desambra ary manolotra sidina telo tsy an-kijanona isan-kerinandro eo anelanelan'i Philadelphia sy Kingston.
Ireo seranam-piaramanidina dia manolotra serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Jamaica sy ireo tanànan'ny Etazonia any Miami, Philadelphia, New York JFK, Dallas, Charlotte, Chicago ary Boston.